Buugaag dabool qurxoon leh | Hal-abuurka khadka tooska ah
Mid ka mid ah walxaha ugu muhiimsan ee buuggu waa jaldigiisa.. Iyada, akhristayaasha suurtagalka ah ayaa ku xayiran. Waana taas, haddii ay indhaha ka soo gasho, waxaad haysataa fursado badan oo aad ku heli karto inuu buugga soo qaado, akhriyo dulucda iyo xiisaha akhriska. Sidaa darteed, haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ama qoraa oo aad rabto inaad si fiican u iibiso buuggaaga, daboolku waa waxa ugu weyn. IYO buugaagta daboollada qurxoon leh way badan yihiin.
Dhab ahaantii, hoos waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah, kuwa casriga ah iyo kuwa hore. Waa hab sidaas waa lagu dhiirigelin karaa oo aad garan kartaa waxaad u baahan tahay inaad eegto si loo gaaro saameyn la mid ah kuwaan lagu gaaro. Ma rabtaa inaad aragto qaar?
Mar haddii aan ognahay in ku-dhaqanku uu ugu fiican yahay, kuma yeeli doono inaad sugto wax badan oo halkan waxaan ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah buugaagta leh dabool qurxoon oo aan ka helnay Google-ka. Haddii aad haysato mid ku soo wacay, waxaad ogtahay in faallooyinka aad noo soo qori karto. U bax!
1 Buugaag leh daboolo qurxoon: Kiiskii yaabka lahaa ee Dr. Jekyll iyo Mr. Hyde
2 Soo koobid ilowsho
3 A orangework saacad
4 albaabka kaynta
6 Horumarka qaranka
8 Waa maxay sababta daboolku muhiim u yahay
8.1 Wax kasta oo ay tahay inay dabool yeeshaan
Buugaag leh daboolo qurxoon: Kiiskii yaabka lahaa ee Dr. Jekyll iyo Mr. Hyde
Gaar ahaan, waxaanu tixraacaynaa nooca Tafatirka Libros del Zorro Rojo. Waa mid ka mid ah daboolyada ugu fiican 2020 runtuna waa taas haddii aad si dhow u eegto, hooska abuura silhouettes jilayaasha ayaa si fiican loo qeexay waxayna macno ku siinayaan waxaad ka heli doonto.
Soo koobid ilowsho
Buugani sidoo kale waxa uu soo baxay 2020 waxaana qoray Siruela. Haddii aad eegto daboolka, waa caddaan cad oo ciwaanka wax yar ka weyn yahay cinwaan hoosaadka, dhammaan koofiyadaha. Waxa la mid ah qoraaga. Laakiin, waxaa ka mid ah qaabab cajiib ah.
Marka hore waa suurtogal in ha garwaaqsan waxa gelinaya ereygaas, kaas oo ah illowsi. Waana tan, sida buuggu qorayo, waqtigu wuxuu keenaa inaan lumino xusuusta, oo aynaan wax walba xasuusan karin 100%. Taasina waa waxa lagu sameeyay daboolka.
A orangework saacad
Kani waa mid ka mid ah buugaagta daboolka qurxoon leh ee aad ka heli karto. Waxayna leedahay dhammaan. Guriga daabacaadda ee Buug-yaraha, waxa uu inoo soo bandhigay buug ku qoran liimi ah oo magaca qoraagu kor ku xusan yahay, hoosna ka weyn yahay oo hadhka leh, iyo weliba far cajiib ah oo cinwaankiisu yahay.
Laakiin waxa ugu yaabka badan waa taas asalka oranji wuxuu ku jabaa saddex xagal kaas oo sawirka qofka leh wax sifo ah uu ka muuqdo: koofiyada bowler-ka iyo indhashareer cajiib ah.
Waxaan ka dooranay buuggan cusub ee RBA Molino guriga daabacaadda sababtoo ah daboolka laftiisa ayaa sheegaya wax badan. Dhab ahaantii, mar kasta oo aad eegto waxa aad ka heli doontaa waxyaabo cusub, ama aragtiyo kala duwan. Waxa aad ku leedahay albaabbo oo ka soo baxa sida jaranjarada, geedo samaysmaya sawir siddeedaad. Laakin hareeraheeda waxaa jira waxyaabo badan oo aan shaki ku jirin in ay la xiriiri doonaan sheekada.
Laga soo bilaabo guriga daabacaadda Anagram. Ku dhawaad ​​​​dhammaan buugaagtani waxay sida caadiga ah leeyihiin jaldi guud, oo leh asal jaale ah iyo afar gees oo dhexda ku yaal kaas oo ah kan loogu talagalay buug kasta. Xaaladdan oo kale, waxay doorteen inay dhejiyaan derbi leben ah. Runtii sheekada ayay la socotaa.
Laakiin waxay ku dareen weedho ku yaal leben gaar ah oo tilmaan u ah waxa akhristuhu doonayo inuu helo. Waxaan odhan karnaa waa weedho jillaab ah; Halkii ay isticmaali lahaayeen dhowr ayay dhigeen.
Iyaga oo ay la raadiyaan in ay qabtaan akhristahaas.
Shaqadan uu sameeyay JM Ponce, oo ka socda guriga daabacaadda ee Glénat, waa dabool ka gudbaya. Waana taas, markaad aragto markii ugu horeysay, waxaad u maleyneysaa in dibiga Osborne la dhigay buur ama wax la mid ah.
Dabcan, marka aad eegto wax yar oo dhow, waxaad ogaaneysaa in qaabka cajiibka ah ee buurta, taas oo u eg sida dabada dheddigga. Waana taas waxay mudnaan siinaysaa sawirka ka hor cinwaanka, taas oo noqon karta mid aan la dareemin, laakiin shaki kuma jiro in daboolku ku baaqayo. Maskaxda ku hay in ku dhawaad ​​wax kasta oo la xidhiidha qaawanaantu ay sameeyaan.
Waxaan ku dhamayn doonaa buugga tafatirka ee Alianza La metamorfosis, ee uu qoray Franz Kafka. Waxay tusaale kuu tahay inaad aragto in daboolku had iyo jeer aanu ahayn inuu la socdo sawir. Mararka qaarkood erayada laftooda ayaa ku filan.
Xaaladan eeg ereyga Metamorphosis dhowr jeer, laakiin haddii aad si dhow u eegto, waxaa jira hadh Kaas oo erey kastaaba sii weynaado. Maxaa dan ah? Hagaag, waxaad ku bilaabi doontaa dabeecad waxaadna arki doontaa horumarka iyo sida ay isu beddesho.
Dhab ahaantii, xiisaha ayaa ah, markaad aragto jaldiga, hubaal waxaad u malaynaysaa in buugga loo yaqaan Metamorphosis ee aan ahayn Metamorphosis. Waxayna tahay in mudnaanta la siiyo kelmaddaas labaad oo ay tahay tan xusuustayada lagu hayo.
Waa maxay sababta daboolku muhiim u yahay
Una daboolku waa sida aragtida koowaad ee qofka. Markaad aragto iyada, adigoo eegaya kaliya, waxaad ogaanaysaa inaad xiisaynayso iyo in kale. Haddii aad ku soo jiidanayso iyo haddii kale. Waxayna tani aad muhiim u tahay inaad hesho fursado badan oo aad ku iibin karto.
Laakiin waxaa dheer, daboolku waa soo koobida buugga ugu muhiimsan. Wax faa'iido ah ma leh in maaddada la daweynayo ay caajis tahay in dabool qurux badan la saaro buug. Mise waxba kuma laha iyada. Waxa kaliya ee ay ku guulaysato waa in akhristuhu uu dareemo khiyaamo, iyo halkii ra'yiga wanaagsan, waxaad halis u tahay kuwa xun.
Wax kasta oo ay tahay inay dabool yeeshaan
Haddii aad rabto inaad sameyso dabool qurux badan oo qumman, waxaa jira dhowr walxood oo aanad iloobi karin. Kuwani waa:
Magaca qoraaga. Yacni, qofka buuggaas qoray. Waxay noqon kartaa magaca dhabta ah ama magac been abuur ah.
Magaca buugga. Xaaladdan oo kale waa sida ama ka muhiimsan qoraaga. Runtii, ciwaanka mar walba wuu ka weynaan doonaa kan qoraaga. Dhawr jeer oo keliya ayaa si kale loo arkay (sida caadiga ah sababta oo ah waa magaca qoraaga ee wax iibiya iyada oo aan loo eegin sheekada uu qoro).
Tifatiraha. Hadduu leeyahay. Iyada oo is-daabacadu aad ugu dhowdahay gacanta iyo suurtogalnimada in lagu helo lacag ka badan lacag la'aan marka loo eego daabacaadda, waxaan naftayda bilaabay marar badan ka hor.
Mararka qaarkood waxaa jiri doona cinwaan iyo subtitle. Ama weedha jillaab. Kuwani had iyo jeer waxay la socon doonaan cabbirka farta yar sababtoo ah ma rabaan inay si weyn u soo baxaan, inkastoo ay soo jiidanayaan dareenka.
Waxaan ku siin karnaa tusaaleyaal saacado badan sababtoo ah runtu waxay tahay in ay jiraan buugaag badan oo jaldi qurxoon leh. Laakin hadda waxaanu kuu dhaafnay inaad ku taliso buugaag jaldigoodu aad jeceshay ama ku dhiiri galiyay fulinta mashaariicdaada. Xor baad u tahay inaad faallo nagu siiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » buugag leh dabool qurxoon